तमलोपामा तीब्र असन्तुष्टिः निर्णयकर्तालाई भनियो भारतीय दलाल ! | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » तमलोपामा तीब्र असन्तुष्टिः निर्णयकर्तालाई भनियो भारतीय दलाल !
तमलोपामा तीब्र असन्तुष्टिः निर्णयकर्तालाई भनियो भारतीय दलाल !
काठमाडौ साउन २७ गते । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले हिजो सार्वजनिक गरेको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको नामावादीमा व्यावक असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
नवलपरासीको रामग्राममा असार ६, ७ र ८ गते भएको पहिलो महाधिवेशनको ५७ दिनपछि भएको पदाधिकारी चयन असमावेशी भएको भन्दै दलकौ नेताहरु विरोध गरेका छन् ।
समावेशी समानुपातिकको नारा दिएर पहिलो महाधिवेशन गराएको थियो तर एउटै जाति र एउटै समुदायको हाली मुहाली भएको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएको छन् । हालको नौ जना पदाधिकारीमध्ये पाँचजना ब्राहमण समुदाय रहेका छन् ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष ह्रदयश त्रिपाठी, अर्का उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, दुई जना सहमहामन्त्री राकेश मिश्र र जयप्रकाश ठाकुर बाहुन हुनुहुन्छ । तीनजना उपाध्यक्षमध्ये वृषेशचन्द्र लाल पनि कायस्थ समुदायका पर्नु हुन्छ जसलाई मधेशमा उच्च जातिका रुपमा लिएको छ ।
दुई जना महासचिवमा वृजेश गुप्ता (बनिया) र जंगीलाल राय यादव रहनु भएको छ भने कोषाध्यक्षमा अनिता यादव रहनु भएको छ ।
हिजो सार्वजनिक गरेको ७४ जनाको लिस्टमा पदाधिकारी सहित १८ जना बाहुन रहेका छन् । सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य समितिको एक चौथाई बाहुन रहेका छन् अर्थात २४ प्रतिशत बाहुनको बाहुल्य रहेको छ । बाँकी अन्य जातीहरु रहनु भएको छ ।
सहमहामन्त्रीमो उम्मेदवारी दिनु भएका जितेन्द्र सिहलाई केन्द्रीय सदस्यमा राखेको छ । उहाँले आफ्नो फेसबुकमा महन्थ ठाकुर, ह्रदयश त्रिपाठी र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र वृषेशचन्द्र लालले महाधिवेशन प्रतिनिधिका साथ विश्वासघात गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले संघर्षशिल नेता तथा कर्याकर्तासँग खेलबाड गर्दै भारतको दलाली गरेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ ।
उहाँले यसका लागि कडा मुल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिँदै पार्टीको बारेमा निर्णय पछि सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको छ ।
विद्यार्थी नेता अजय पटेलले महन्थ ठाकुरले उच्चब्राहमणवादी भएको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले एक प्रतिशत अहंकारी ९९ प्रतिशत मधेशीलाई बेबकुफ बनाइरहेको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
तराई मधेश विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष मनिष मिश्राले परिणाम हेरेर त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै भन्नुभएको छ, आजको तमलोपाको कार्यसमिति बिस्तारको निर्णयले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। हामी काहाँ छौ र काहाँ जादै छौ भनि सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
अगाडी भन्नु भएको छ, भातृसंगठन नाम मात्रको रहेको र उसको पदाधिकारीहरू पार्टीभित्र उकुसमुकुस भई रहनु पर्न् बाध्यतालाई निर्णयले दर्साएको छ । अरूको कुरा नसुन्नु र ईमानदारी साथ काम गर्नु भनेको पार्टी बिरोधी गतिविधि हो भनि सावित गरेको छ । के यहि हो लोकतन्न्र रु के यहि हो समावेसी रु के यही हो राजनैतिक युवालाई प्रोत्साहन दिएको रु यस्तै तरीकाले के तमलोपा ले मधेशको मुक्ति दिलाउन सक्छ रु के यस्तो निर्णय प्रति युवाहरू आकर्षित हुन सक्छ रु लगायत थुप्रै प्रश्नहरू छन तर आसा गरौ दोस्रो लिस्टमा यि जबाफहरू सहित बृहत राजनितिक शक्ति निर्माण अभियान गर्ने उदेश्यले गठित भएको तमलोपा आफ्नो त्यही उदेश्यका साथ सबैको सामु आउने छ र मधेश मुक्तिको बागडोर सम्माल्नेछ।’
विद्यार्थी नेता रोशन चौधरीले पनि पार्टीले सार्वजनिक गरेको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको नामावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ।
उहाँले पनि आफ्नो फेसबुकमा यस्तो लेख्नु भएको छ,–‘तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी को प्रथम महाधिबेशन रामग्राम को परासी बजारमा भएको थियो १ समाबेशी तथा समानूपातिक सिदान्त अवलम्बन नगरी ग्रेडी़ प्रणालीबाट केन्द्रिय कार्यसमिती बनाएकोमा पार्टी नेता तथा यूवा नेताहरूले मिडीया र समाजिक सञ्जाल मार्फत बिरोध गर्नू कारणहरू हुन
उहाँले यो निर्णयलाई विरोध गर्नुको नौ कारण यसरी प्रस्तुत गर्नुभएका छ ।
१.विस्तारित केन्द्रिय कार्यसमिती मा १. महासचिब ,१. सह महासचिब र प्रबक्ता मनोनयन नगरी खाली राख्नू
२. तर उपाधछ पद मा मानिय शर्बेन्द्र नाथ शुक्ला जी मनोनयन गर्नू ९ उहा लाई मनोनयन लिस्ट मा नराखनू
३. ८ जना पदाधिकारी मध्ये ६ जना उच्च जाति का २ जना बाजी ९मधेशी० हून
४. मधेश कै पहिलो ,दोस्रो र चौथो जनसंख्या थारू, मुस्लिम र दलितलाई बाई पास गर्नू
५. केन्द्रिय कार्यसमितीमा उच्च जातिको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य राख्नू
६. समाबेशी र समानूपाति प्रणाली लाई खिल्ली उडाउनू ७० नेतृत्व तह असफल, अहंकारबाद र नस्लबादी व्यहार देखाउनू
८. यूवा को नाम मा आफनो खोल्ती को यूवा राख्नू